Online Converter, vatungamiriri uye counter
PaIndaneti Calculator CalcProfi
CalcProfi – vakasununguka Converter, converters, rates, akatorwa exchange rates, unovhara paIndaneti. Kutendeuka matafura, kukarukureta, mwero for free.
Physics, mitemo dzinokosha Converter
Mutemo Newton kechipiri inofamba Calculator
Change ane simba, vakawanda uye kumhanyisa nokuda Newtons mutemo wechipiri.
Orbital velocity fomura Calculator
Change orbital velocity imwe nyika iri zuva nenyika dzinotenderera pariri, kana hombe muviri pamwe gobvu rinotsanangurwa uye nharaunda.
Mutemo Newton wechitatu inofamba Calculator
Change vakawanda uye kumhanyisa zvinhu zviviri achishandisa Newtons mutemo wechitatu.
Electrical simba simba nguva Calculator
Change magetsi simba, zvemagetsi simba, nguva uye vairaramiswa kubva kune mumwe.
Current, nemishonga, voltage rondedzero Calculator
Change kuitika, voltage uye mumweya chikamu magetsi redunhu.
Chisina kutsetseka kumhanyisa fomura Calculator
Change chisina kutsetseka kumhanyisa, chisina kutsetseka velocity uye nguva inofamba, kuburikidza yokuita chisina kutsetseka kumhanyisa.
Centripetal kumhanyisa fomura Calculator
Change centripetal kumhanyisa, nharaunda ane denderedzwa uye velocity, maererano dzeraundi makavharidzira inofamba mukana wokuti vanhu vanga fomura.
Density manyoro uye munyu mvura Calculator
Change arambe achirema manyoro kana munyu mvura panguva yakasiyana salinity mumatunhu uye tembiricha.
Force nguva, online kukarukureta.
Kukarukureta kwesimba nguva (torque nguva) kuburikidza nharaunda-Vector uye simba vektori muviri hwakasimba.
Sound nokukurumidza mudenga, online kukarukureta.
Kukarukureta nokurira kumhanya mudenga (km / h, m / s uye etc.) panguva tembiricha dzakasiyana, online.
Rinokweva zvinogona simba fomura Calculator
Change zvinogona simba, vakawanda uye yakakwirira muviri.
Boyle mutemo Calculator
Change kwokutanga uye yokupedzisira Vhoriyamu uye kumanikidzwa negasi rinobva mutemo Boyle wacho.
Speed, nguva, kure, online kukarukureta.
Kukarukureta (paIndaneti) pamusoro akurumidze, nguva, kure uye dependencies pakati pavo.
Kutiza velocity fomura Calculator
Change kupukunyutsa velocity imwe nyika iri zuva nenyika dzinotenderera pariri, kana hombe muviri pamwe gobvu rinotsanangurwa uye nharaunda.
Molarity wevasungwa fomura Calculator
Change matadza wevasungwa, nyandu remubatanidzwa, Bhuku uye inonyatsoita kurema makemikari mushonga.
How zvikuru sei Ini vanoyera pane dzimwe nyika
Zvakadini mozviyera pane dzimwe renzou mapuraneti.
Chisina kutsetseka velocity fomura Calculator
Change chisina kutsetseka velocity, yorusvingo zvayaitenderera paguyo uye nenguva Kutenderera, kuburikidza yokuita chisina kutsetseka velocity.
Mathematic Converter, masvomhu, nemasvomhu, geometry
Chakapatsanurwa Calculator - Uyezve, kubvisa, chokuwanziridza, weboka zvikamu, uyewo noMweya chinokosha nhamba.
Nemasvomhu mashoko paIndaneti Calculator
Change uye gadzirisa nemasvomhu mashoko, akadai Uyezve, kubvisa, chokuwanziridza, nokupesana, mativi mudzi, muzana.
Square mudzi Calculator
Change pachivara mudzi (2 dhigirii mudzi) kana kukuru chero nhamba.
Cube mudzi Calculator
Ngaaverenge kuutio mudzi (3 dhigirii mudzi) kana kukuru chero nhamba.
Nth mudzi Calculator
Ngaaverenge square, kuutio uye chero nth mudzi kana kukuru chero nhamba.
Column Kuwedzera mapepa
Change achiwedzera (kuwanda) Numeri maviri, achishandisa mbiru Kuwedzera nzira.
Column kubvisa mapepa
Change Tikabvisa (musiyano) Numeri maviri, achishandisa mbiru kubvisa nzira.
Column chokuwanziridza mapepa
Change vachiwedzera (chigadzirwa) Numeri maviri, achishandisa mbiru chokuwanziridza nzira.
Column nokupesana mapepa
Change unogovera (quotient) Numeri maviri, achishandisa mbiru kutozopesanisa nzira.
Change nhamba mamiriyoni, mabhiriyoni, dzakazadza, zviuru, lakhs uye crores. Nhamba zeros chero nhamba.
Tsvaga bhuku akasiyana geometric maumbirwo, akadai kuutio, cône, humburumbira, idenderedzwa, Pyramid, kubudikidza Masvomhu siyana.
Cylinder vhoriyamu fomura Calculator
Tsvaga bhuku humburumbira, nokuda nzira, uchishandisa kukwirira nehwaro nharaunda pamusoro humburumbira.
Cone vhoriyamu fomura Calculator
Tsvaga bhuku cône, nokuda nzira, uchishandisa kukwirira nehwaro nharaunda pamusoro cone.
Cube vhoriyamu fomura Calculator
Tsvaga bhuku rimwe kuutio, kubudikidza nzira, uchishandisa kureba kuutio wacho mucheto.
Sphere vhoriyamu fomura Calculator
Tsvaga bhuku bhora, nokuda nzira, uchishandisa nharaunda pamusoro bhora.
Mativi rectangular piramidhi vhoriyamu Calculator
Tsvaga bhuku rakasiyana-siyana mapiramidhi, akadai mativi, rectangular uye chero mamwe marudzi mapiramidhi, kubudikidza Masvomhu siyana.
Find imwe nzvimbo akasiyana geometric maumbirwo, akadai square, rectangle, parallelogram, trapezoid, rhombus, denderedzwa, Triangle, kubudikidza Masvomhu siyana.
Area ane denderedzwa, denderedzwa nharaunda fomura Calculator
Find imwe nzvimbo imwe rhombus, kubudikidza nzira, uchishandisa nharaunda kana dhayamita pamusoro denderedzwa.
Area ane mativi, mativi nharaunda fomura Calculator
Find imwe nzvimbo sikweya, kubudikidza Masvomhu, uchishandisa kureba sikweya mativi kana diagonal.
Area ane parallelogram, parallelogram nharaunda fomura Calculator
Find imwe nzvimbo imwe parallelogram, kubudikidza Masvomhu, uchishandisa kureba mativi, urefu, diagonals uye angled pakati pavo.
Area ane rectangle, rectangle nharaunda fomura Calculator
Find imwe nzvimbo imwe rectangle, kubudikidza Masvomhu, uchishandisa kureba mativi, urefu diagonal uye angled pakati diagonals.
Area ane rhombus, rhombus nharaunda fomura Calculator
Find imwe nzvimbo imwe rhombus, kubudikidza Masvomhu, uchishandisa kureba divi, urefu, kureba diagonals, incircle kana circumcircle nharaunda.
Area ane trapezoid, trapezoid nharaunda fomura Calculator
Find imwe nzvimbo imwe trapezoid, kubudikidza Masvomhu, uchishandisa kureba chawo mativi, urefu, midline, urefu diagonal uye angled pakati pavo.
Nzvimbo netriangle, equilateral isosceles netriangle nharaunda fomura Calculator
Find imwe nzvimbo rakasiyana-siyana zvokuridza dzakadai equilateral, isosceles, kurudyi kana scalene Triangle, kubudikidza Masvomhu siyana.
Tsvaga mukomberedzo dzakasiyana geometric maumbirwo, akadai denderedzwa, mativi mana akaenzana, rectangle, Triangle, parallelogram, rhombus, trapezoid kubudikidza Masvomhu siyana.
Sekamufarenzi ane denderedzwa (mukomberedzo ane denderedzwa) inonyatsoita Calculator
Tsvaga sekamufarenzi (mukomberedzo) ane denderedzwa, kubudikidza nzira, uchishandisa nharaunda ane denderedzwa.
Mukomberedzo ane mativi, mukomberedzo fomura Calculator
Find mukomberedzo ane mativi, kubudikidza Masvomhu, uchishandisa nokureba mativi divi.
Mukomberedzo ane parallelogram, mukomberedzo fomura Calculator
Tsvaga mukomberedzo pamusoro parallelogram, nokuda nzira, uchishandisa nokureba parallelogram mativi.
Mukomberedzo ane rectangle, mukomberedzo fomura Calculator
Tsvaga mukomberedzo imwe rectangle, kubudikidza nzira, uchishandisa nokureba rectangle mativi.
Mukomberedzo ane rhombus, mukomberedzo fomura Calculator
Tsvaga mukomberedzo pamusoro rhombus, nokuda nzira, uchishandisa nokureba divi rhombus.
Mukomberedzo ane trapezoid, mukomberedzo fomura Calculator
Tsvaga mukomberedzo imwe trapezoid, kubudikidza nzira, uchishandisa kureba zvose trapezoid mativi.
Mukomberedzo pamusoro netriangle, mukomberedzo fomura Calculator
Tsvaga mukomberedzo pakubhadhara akasiyana zvokuridza dzakadai equilateral, isosceles, kurudyi kana scalene Triangle.
Distance pakati mbiri pfungwa Calculator
Change kure pakati mbiri muzano encombrements mbiri.
Midpoint fomura Calculator
Change midpoint ane mutsetse chidimbu pakati mbiri muzano encombrements mbiri.
Distance fomura Calculator
Change kure pakati mbiri muzano miganhu maviri, achishandisa Coordinates avo.
Change dzinoita, mativi uye nzvimbo netriangle.
Date uye nguva
Wedzerai kana kutapudza mazuva uye nguva kubva musi
Add nguva zvevakomana kana kutapudza nguva kubva zuva.
Chakawedzera uye Tikabvisa nguva
Chakawedzera uye Tikabvisa nguva karukureta: kuwedzera kana kutapudza nguva pamazuva, maawa, maminiti, seconds.
Change mazuva uye nguva pakati misi
Change zuva nguva pakati maviri yemichindwe 2 nguva, mumakore, nemwedzi, mavhiki, mazuva, maawa, maminiti, seconds.
Time atendeuka Calculator, vatendeuki nguva makore, mazuva, maawa, maminiti, seconds.
Nguva yakawanda sei kusvikira musi?
Vangani makore, mazuva, maawa, maminiti, nemasekonzi vakasiya kusvikira zuva.
Nguva yakawanda sei pakasiyiwa musi?
Sei makore, mazuva, maawa, maminiti, mumasekonzi zhinji apfuura kubva musi.
Vangani Mazuva mumwedzi?
Tsvagurudza nhamba chaiyo mazuva chero mwedzi.
Vangani mazuva pagore?
Mazuva ari kuitika, mangwana, kwaainge kana chero zvimwe gore.
Uyezve, kubvisa nguva, musiyano pakati misi, nguva kutendeuka: zuva, maawa, maminiti, seconds.
How mazuva mazhinji kusvikira kutsime?
An nhamba chaiyo mazuva, maawa, maminiti nemasekonzi yasara kusvikira chitubu rinotevera.
How mazuva mazhinji kusvikira chirimo?
An nhamba chaiyo mazuva, maawa, maminiti nemasekonzi yasara kusvikira zhizha rinotevera.
Vangani mazuva kusvikira vawe?
An nhamba chaiyo mazuva, maawa, maminiti nemasekonzi yasara kusvikira mangwana kuwa.
How mazuva mazhinji kusvikira chando?
An nhamba chaiyo mazuva, maawa, maminiti nemasekonzi yasara kusvikira mangwana chando.
Internet, makombiyuta, padandemutande maturusi pasiwedhi emagetsi
Chamutsa simba vakachengeteka pasiwedhi yakavakirwa guru.
Random pasiwedhi jenareta
Chamutsa simba chero rakachengeteka password.
IP My. Tsvaka wako Rinozvikudza ip kero
Unogona kuwana kwenyu IP address, uchishandisa hurongwa, vanotipa, nyika uye guta.
Information about IP kero
Ona Provider, nyika uye muguta IP kero.
Random nhamba dzorunhare jenareta
Get mazita anongoitika nhamba dzenhare nokuda landline dzeserura, pamwe zvakasiyana nhamba digits vari Formats siyana.
Online Barcode jenareta
Get Barcode nokuda digitaalinen chigadzirwa romutemo.
Online QR code jenareta
Get mufananidzo QR code chero mashoko.
Whois basa, domai ongororo
Information about chero achazoburuka, NS Server, mutarisiri contactsGoogle uye zvichingodaro.
Russian kiibhodhi translit
Shandisa Russian Cyrillic rakapotsa kiibhodhi pamwe Kuenda Chirungu kiibhodhi.
Tsamba Russian nemabhii
Transliterate Russian tsamba Chirungu uye Chirungu tsamba wokuRussia.
Hindi kiibhodhi paIndaneti
Nyorai Hindi mabhii Hindi rakapotsa kiibhodhi.
Arabic kiibhodhi paIndaneti
Nyorai Arabic mabhii Arabic rakapotsa kiibhodhi.
Currency convert mari Exchange, pamusika wemari
Bitcoin calculator online, converter Bitcoin. Bitcoin mutengo nhasi pamusika wemari yemari yemari.
Ethereum calculator online, mutungamiri Ethereum. Ethereum mutengo nhasi pamusika wemari yekushandura mari.
Litecoin calculator online, converter Litecoin. Litecoin mutengo nhasi pama digital exchange exchange market.
Chemistry, makemikari nyaya, magasi, zvinhu
Health, kugwinya, kudya
Basal metabolic raté Calculator
Change zvazvingava rako basal metabolic, kuti ndiye uwandu macalorie kuti muviri wako unopisa apo ndakazorora ari neutrally unozvidzora zvakatipoteredza.
BMI fomura Calculator
Change body mass indekisi varume nevakadzi zvichienderana kubva zera rako uye muviri chimiro.
Change uwandu macalorie pazuva unofanira kubvisa kubva zvaunodya kana uchida kuderedza uremu.
Change imi zuva mafuta zvinodiwa kana uchida kurasikirwa uremu kana kuramba uremu yenyu.
Postcodes, mamiriro okunze, kure uye nguva dzinodengenyeka
Yakarurama Weather forecast for guta upi munyika yanhasi, mangwana, 3 mazuva, pavhiki, mazuva 10.
Distance pakati pamaguta Calculator
Geographical kure nokuda vangaruramisa mugwagwa uye mugwagwa pakati maguta maviri.
Musiyano nguva pakati pamaguta
Dudza kusiyana nguva pakati pamaguta, nguva munzvimbo dzinorwiwa, musiyano nguva pakati pamaguta zvenyika
Postal Bumbiro Finder
Tsvaka mumwe Postcode kubudikidza kero chero pfungwa zvenyika online.
Auto, motokari: tai hukuru, michina Specs
Car michina nokurondedzerwa
Technical nokurondedzerwa chero motokari akasarudzei uye muenzaniso.
Selection motokari kubudikidza nokurondedzerwa
Kusarudza motokari kubudikidza kupiwa michina nokurondedzerwa.
Wheel uye dhisiki hukuru nemota nohumwe uye muenzaniso
Factory hukuru kwemavhiri uye disks, yokutsiva zvokusarudza, dhisiki zvaizovhara, drilling chero akasarudzei uye motokari womuenzaniso.
Zvakachinja zvokunze kukura vhiri, Clearance, speedometer readout, etc. nevamwe vhiri riri motokari.
Pfeka hukuru, shangu hukuru, kukura machati, chishongo chomusoro, mabhandi, nemhete hukuru
Evanhu shirt hukuru paIndaneti Calculator
Change shirt evanhu hukuru nyika dzakasiyana, kufanana American, British, European uye dzakawanda hukuru.
T-shirts hukuru paIndaneti Calculator
Rine huru neduku dzevanhu uye vakadzi t-shirt Sizes chati munyika dzakasiyana.
Change evanhu andapeni hukuru kunyika dzakasiyana, kufanana American, German, French, vokuItaly, Russian, Czech, Slovak, munyika dzakawanda, kana muchiuno hukuru.
Change Vakadzi andapeni hukuru kunyika dzakasiyana, kufanana European, British, American, hukuru dzakawanda, kana muchiuno uye muhudyu hukuru.
Vakadzi bikinis hukuru paIndaneti Calculator
Change vakadzi bikinis hukuru kunyika dzakasiyana, kufanana American, British, vokuItaly, Russian, dzomunyika hukuru, bust kukura, kana muchiuno uye muhudyu hukuru muna masendimita.
Jeans uye mudhebhe hukuru paIndaneti Calculator
Change evanhu uye vakadzi in casino uye mudhebhe hukuru munyika dzakasiyana, kufanana American, British, vokuItaly, French, Russian, Japanese, munyika dzakawanda, kana muchiuno uye muhudyu hukuru.
Change Mabhachi dzevakadzi Sizes kunyika dzakasiyana, kufanana US, UK, European, vokuItaly, Japanese, Russian, hukuru dzakawanda, pahupamhi muchipfuva, kana muchiuno uye muhudyu hukuru.
Teen kuti shangu kukura Calculator
Jekesai kuyaruka kuti shangu hukuru, exchange kuyaruka kuti shangu hukuru kune hukuru kunyika dzakasiyana.
Girls shangu hukuru paIndaneti Calculator
Change vasikana shangu hukuru kunyika dzakasiyana, kufanana European, British, American (USA), Japanese hukuru kana masendimita.
Children shangu hukuru paIndaneti Calculator
Change mwana nokushongedza hukuru kunyika dzakasiyana, kufanana American, British, European, hukuru Russian, pahupamhi chipfuva uye kukwirira, kana mwana wacho zera.
Evanhu zvikabudura hukuru paIndaneti Converter
Change zvikabudura evanhu Sizes kunyika dzakasiyana, kufanana American (US / UK), French, vokuItaly, Russian, hukuru dzakawanda, kana muchiuno kukura mune masendimita.
Change zvikabudura dzevakadzi Sizes kunyika dzakasiyana, kufanana American, British, French, vokuItaly, Russian, Japanese, hukuru dzakawanda, kana muchiuno uye muhudyu hukuru muna masendimita.
Rinotsanangura wakasonwa nejira evanhu Ukuru uye kupenda kunyika dzakasiyana.
Change vakadzi wakasonwa nejira hukuru kune zvakasiyana siyana, kufanana dzakawanda, ruoko sekamufarenzi muna masendimita kana masendimita.
Accessories hukuru paIndaneti Calculator
Find uye kutendeuka nenhumbi siyana, sezvinoita ngowani, mabhandi, nezvindori, wakasonwa nejira hukuru munyika dzakasiyana.
Change mhete hukuru kune American, British, Russian, Japanese hukuru, dhayamita mune millimeters uye masendimita, kana chigunwe sekamufarenzi.